Nnwom 107 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn anwonwadwuma nti, munyi no ayɛ
Ɔde wɔn faa ɔkwampa so (7)
Wama nea osukɔm ne ɔkɔm de no amee (9)
Oyii wɔn fii sum mu (14)
Ɔkasa ma wonyaa ayaresa (20)
Ɔbɔ ahiafo ho ban fi amanehunu ho (41)
(Nnwom 107-150) 107 Monna Yehowa ase, efisɛ oye,+Na ne dɔ nni huammɔ; ɛwɔ hɔ daa.+ 2 Momma wɔn a Yehowa agye wɔn no nka saa;Wɔn a wagye wɔn afi atamfo nsam no;+ 3 Wɔn na ɔboaboaa wɔn ano fii nsaase no so,+Apuei ne atɔe,*Atifi ne anaafo.+ 4 Wokyinkyin sare so, asaase pradadaa no so;Wɔanhu ɔkwan a ɛde wɔn bɛkɔ kurow a wɔbɛtena so no mu. 5 Ɔkɔm ne osukɔm dee wɔn;Wɔyɛɛ* mmerɛw ara ma anka wɔreyɛ atwitwa ahwe. 6 Wɔn ahohia mu, wosu frɛɛ Yehowa mpɛn pii,+Na ogyee wɔn fii wɔn ahokyere mu.+ 7 Ɔde wɔn faa ɔkwampa so+Kɔɔ kurow a wɔbɛtena so no mu.+ 8 Ma nnipa nna Yehowa ase,+ ne dɔ a enni huammɔNe anwonwadwuma a wayɛ ama nnipa mma nti.+ 9 Wama nea osukɔm de no* amee;Na nea ɔkɔm de no* nso, wama nneɛma pa abu no so.+ 10 Wɔn mu binom tenaa esum kabii mu;Wɔde wɔn guu afiase de nkɔnsɔnkɔnsɔn guu wɔn ma wohuu amane. 11 Efisɛ wɔtew Onyankopɔn asɛm so atua;Na wobuu Ɔsorosoroni no akwankyerɛ animtiaa.+ 12 Enti ɔma wɔfaa ɔhaw mu na ama wɔabrɛ wɔn koma ase;+Wohintiwii, na wɔannya obiara anso wɔn mu. 13 Wɔkɔɔ ahohia mu no, wosu frɛɛ Yehowa,Na ogyee wɔn fii wɔn ahokyere mu. 14 Oyii wɔn fii esum kabii no mu;Ɔtetew nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu.+ 15 Ma nnipa nna Yehowa ase, ne dɔ a enni huammɔ+Ne anwonwadwuma a wayɛ ama nnipa mma nti. 16 Wabubu kɔbere apon,Na watwitwa ne nnade mu.+ 17 Wodii nkwaseasɛm, na wɔn mfomso+ ne wɔn mmarato nti,+Wohuu amane. 18 Ná aduan biara nyɛ wɔn* akɔnnɔ;Wɔbɛn owu abobow* ano. 19 Wɔkɔ ahohia mu a, wosu frɛ Yehowa,Na ogye wɔn fi wɔn ahokyere mu. 20 Sɛ ɔkasa a na wɔanya ayaresa,+Na wagye wɔn afi amoa a wɔhyɛ mu no mu. 21 Ma nnipa nna Yehowa ase, ne dɔ a enni huammɔNe anwonwadwuma a wayɛ ama nnipa mma nti. 22 Ma wɔmfa aseda mmɔ afɔre mma Onyankopɔn+Na wɔmfa osebɔ nka ne nnwuma ho asɛm. 23 Wɔn a wɔde ahyɛn kɔ po soA wɔyɛ adwuma wɔ nsu akɛse so no,+ 24 Wɔahu Yehowa nnwumaNe n’anwonwadwuma wɔ subun mu;+ 25 Wɔahu sɛnea ɔkasa ma ahum tu,+Na ɛma asorɔkye bɔ. 26 Ɛde wɔn kɔ sorosoro,Na wosian ba fam. Mmusu a ɛreba nti, ehu ka wɔn.* 27 Wɔkɔ afã-afã te sɛ ɔsabofo,Na wɔn nyansa nyinaa nkosi hwee.+ 28 Ɛba saa a, wosu frɛ Yehowa wɔn ahohia mu,+Na ogye wɔn fi wɔn ahokyere mu. 29 Ɔma ahum no yɛ dinn,Na po asorɔkye no yɛ komm.+ 30 Sɛ ɛyɛ komm a, wodi ahurusi.Na ɔde wɔn kodu hyɛn gyinabea a wɔrekɔ no. 31 Ma nnipa nna Yehowa ase, ne dɔ a enni huammɔNe anwonwadwuma a wayɛ ama nnipa mma nti.+ 32 Ma wɔnkamfo no wɔ asafo bagua mu;+ Ma wonyi no ayɛ wɔ mpanyimfo guabɔ* mu. 33 Ɔma nsubɔnten yɛ sɛ sare so,Na nsuti dan asaase pradadaa,+ 34 Ɔma asaase pa dan nkyene asaase,+Esiane wɔn a wɔtete so no bɔne nti. 35 Ɔma sare so dan ɔtare a demmire* afifi wom,Na asaase pradadaa dan nsuti.+ 36 Ɛhɔ na ɔma wɔn a ɔkɔm de wɔn tena,+Na ama wɔakyekye kurow a wɔbɛtena mu.+ 37 Wɔyɛ kua, na wɔyeyɛ bobefuw*+Na ama wɔanya nnɔbae pii.+ 38 Ohyira wɔn ma wɔyɛ bebree;Ɔmma wɔn afieboa dodow so ntew.+ 39 Nanso nhyɛso ne ɔhaw ne awerɛhow nti,Wɔn dodow so san tew na wɔn anim gu ase. 40 Ogu atitiriw anim ase,Na asaase a ɛda mpan a enni anammɔnkwan na ɔma wokyinkyin so.+ 41 Nanso ɔbɔ ahiafo ho ban* fi amanehunu ho,+Na ɔma wɔn mmusua dɔɔso sɛ nguankuw. 42 Atreneefo behu na wɔadi ahurusi;+Na amumɔyɛfo de, wɔn nyinaa bɛka wɔn ano atom.+ 43 Obiara a ɔyɛ onyansafo de nsɛm yi bɛto ne tirim,+Na nnwuma a Yehowa de kyerɛ ne dɔ a enni huammɔ no, obedwinnwen ho akɔ akyiri.+
^ Anaa “Owiapuei ne owiatɔe.”
^ Anaa “Wɔn kra yɛɛ.”
^ Anaa “osukɔm de ne kra.”
^ Anaa “ɔkɔm de ne kra.”
^ Anaa “owu pon.”
^ Anaa “ehu ka wɔn kra.”
^ Nt., “agua.”
^ Anaa “ɔpagyaw ahiafo,” kyerɛ sɛ, oyi wɔn kɔ akyirikyiri.